भारतीय चुनावः मोदीले ट्विटर अभियान चर्काउँदा महिलाको आवाजको पक्षमा ममता, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भारतीय चुनावः मोदीले ट्विटर अभियान चर्काउँदा महिलाको आवाजको पक्षमा ममता
बीबीसी । विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतको आगामी चुनावका लागि विभिन्न राज्यहरूबाट उम्मेद्वारहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो पार्टी अल इण्डिया तृणमूल कंग्रेस को उम्मेद्वार सूची सार्वजनिक गरेकी छन् जसमा ४१ प्रतिशत महिलाहरू रहेका छन्। जम्मा ४१ उम्मेद्वारमध्ये १७ जना महिला छन् जसमा दुई क्षेत्रीय अभिनेत्रीहरू मिमि चक्रवर्ती र नुसरत जहान पनि छन्।
संसदमा भने पुरुष नै हाबी
यसअघि सन् २०१४ को चुनावमा जितेकी पूर्व अभिनेत्री मुनमुन सेन पनि यसपटक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। महिलाहरूको उपस्थितिलाई लिएर आफूलाई खुब खुसी लागेको र यो निकै गौरव गर्ने क्षण भएको भन्दै उनले अन्य पार्टीलाई पनि त्यसै गर्न चुनौती दिएकी छन्। विगत केही वर्ष यता मतदान गर्न जाने महिलाहरूको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ।
भारतका गाउँ परिषद्हरूमा सन् १९९० को पूर्वार्द्ध देखि महिलाका लागि सिट आरक्षित गरिए पनि संसदमा भने अझै पनि पुरुषहरू हाबी छन्। महिला मतदाताहरू चुनाव जित्नका लागि शक्तिशाली बन्दै गइरहेका बेला राजनीतिक पार्टीहरूले पनि उनीहरूलाई सक्रिय रुपमा लक्षित गर्नुपर्ने महसुस गरिरहेका छन्।
विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले महिलाका लागि निश्चित सिट संख्या छुट्याउने प्रतिवद्धता बुधवार जाहेर गरेका छन्। २० वर्षअघि आफ्नो पार्टीले गरेको उक्त प्रस्ताव अनुसार यदि कंग्रेस सत्तामा आए ३३ प्रतिशत सिट महिलालाई जानेछ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रृंखलाबद्ध रुपमा ट्विट गरेका छन्। उनले आफ्ना ट्विटमा चर्चित कलाकारदेखि सञ्चारकर्मी र विपक्षी राजनीतिज्ञलाईसमेत ट्याग गरेका छन् र धेरै मानिसहरूलाई मत खसाल्न प्रभावित पार्न पनि भनेका छन्।
कांग्रेसकी नेतृ प्रियङ्का गान्धी अन्ततः ट्विटरमा आएकी छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातमा भाषण गरेको केही घण्टापछि उनले दुईवटा ट्वीटसमेत गरेकी छन्।